Build Myanmar 2016 | Rose Garden Hotel | Yangon, Myanmar
10-12 November 2016 at The Rose Garden Hotel
Build Myanmar 2016, isaregional trade event arranged in an intimate conducive hotel ballroom setting gathering exhibiting companies from Singapore, Thailand, Korea, Japan, Indonesia, India, Malaysia and Myanmar showcasing the latest products and brands from the region which aims to connect business relationships for those in the building and infrastructure industry.
The event will be showcasing the latest in building and infrastructure equipment and technology from around the region with more than 90% of the exhibiting companies coming from overseas in fields of concrete, HVACR, PPVC, Audio/LED lighting, and more.
Contact us for early bird rates: info@theroseyangon.com
ကျွန်တော်တို့ Myanmar Builder Guide မှ မီဒီယာ partner အနေဖြင့် ပါဝင်သည့် Build Myanmar 2016 ကို ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
BUILD Myanmar 2016 ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထူးပြု ပြပွဲနှင့် ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြပွဲမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကူညီပံ့ပိုးမယ့် အဓိကကျသည့် ကွန်ကရစ်၊ မြေအောက်ဆောက်လုပ်ရေး၊ PPVC ၊ HVACR ၊ လက်လီရောင်းချရေးနှင့် ဧည့်ကြိုကဏ္ဍတို့အသီးသီးမှ နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများ လာရောက်ပြသမည်ဖြစ်သည်။
ပါဝင်ပြသမည့်ထုတ်ကုန်များပစ္စည်းများမှာ ကွန်ကရစ်ပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ရေပိုက်၊ မီးသီး၊ မီးလုံး၊ အလုပ်ခွင်လုံခြုံရေးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ရေခဲစနစ်များနှင့် လေ၀င်လေထွက်နည်းပညာများ ပါဝင်ပါသည်။
ပြပွဲကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက် မှ ၁၂ ရက်အထိ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမ၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ Rose Garden Hotel တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
Category: Uncategorized October 24, 2016
PreviousPrevious post:Christmas at Rose Garden Hotel!NextNext post:food – art
Join our Bavarian Brunch “Frühschoppen” – special Father’s day edition!
A great way to spend Sundays